Fiteny kanada - Wikipedia
Ny fiteny kanada （ಕನ್ನಡ), na siriganada dia fiteny diravidianina any atsimon' i India. Izy no fiteny tena antitra indrindra amin' ny fiteny diravidianina. Teny ôfisialin' i Karnataka ny fiteny kanada. Misy olona 45 tapitrisa no mampiasa ny fiteny kanada any India
1.1 Sata ôfisialy
Efa nisy 2 500 taona mahery izay no nisy ny fiteny kanada, ary soratana amin' ny anidim-baninteny kanada izy. Noforonina tamin' ny taonjato faha-2 io abidim-naninteny io. Mitovy endrika amin' ny fiteny diravidianina hafa ny fivoaran' ny fiteny kanada, indrindra amin' ny fiteny tamily sy ny fiteny telogo. Tamin' ny taonjato farany, nanana fiantraikany tamin' ny fiteny sanskrity ny fiteny kanada sy ny fiteny telogo.
Misy fahasamihafana ny fiteny soratana sy ny fiteny tenenina, ary samihafa ny fiteny kanada arakaraky ny faritra. Manana endrika isam-paritra 20 ny fiteny kanada. Ny tena be mpiteny indrindra dia:
Sata ôfisialy[hanova | hanova ny fango]
Ny fiteny kanada dia anisan' ny teny ôfisialin' i India ary teny ôfisialin' ny faritan' i Karnataka. Misy mpiteny kanada ihany koa any amin' ny faritra Tamil Nadu, fa tsy teny ôfisialy io teny io any.
Ny fiteny kanada dia manana alphasyllabaire hanoratana azy. Misy litera 52 ilay alphasyllabaire. Mitovitovy endrika amin' ny fomba fanoratana hafa any India ny soratra kanada. Satria avy amin' ny soratra Brahmî ny soratra kanada ; somary sarotsarotra ihany ny manoratra amin' io soratra io, manana litera tapany izao ohatra ny alphasyllabaire kanada, ary manana ligatiora manokana na tsindrim-peo ihany koa izy. Noho izany, mihoatra be ny litera 52 ny abidy ny isan' ny eva (symbole). Afaka manatambatra litera maro koa ny mpanoratra raha te-hanao ottakshara vaninteny iray ny eva iray.
((en)) Hianatra ny fiteny kannada Archived Janoary 17, 2013 at the Wayback Machine
((en)) Fehezanteny amin'ny fiteny kannada Archived Septambra 2, 2005 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_kanada&oldid=1038213"
Voaova farany tamin'ny 28 Septambra 2021 amin'ny 10:57 ity pejy ity.